Tsy manana olana lehibe amin’ny vaovao faikany i Kroasia, hoy ny mpanolotra vaovao · Global Voices teny Malagasy
Saingy nampiany hoe indraindray manolana ny zava-misy ny fampitam-baovao
Voadika ny 18 Novambra 2019 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Français, srpski, Español, русский, English
Damira Gregoret. Sary avy amin'ny pejiny Facebook ofisialy.
Nivoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency , tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mpanangom-baovao ara-politika i Damira Gregoret ary mpampita vaovao amin'ny RTL Kroasia. Tamin'ny Oktobra 2018, nanao lohateny tao amin'ny fampitam-baovao teo an-toerana izy rehefa avy nametra-panontaniana tamin'ny Praiminisitra Kroasiana Andrej Plenkovic nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, izay namaliany azy tamin'ny fomba mieboebo hoe:”Tena mahafinaritra ianao ry Damira.” Niala tsiny tamin'ny ampahibemaso izy taty aoriana.
Niresaka taminy momba ny tontolon'ny fampitam-baovao sy ny fanodikodinam-baovao any Kroasia mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena, izay atao amin'ny 20 Janoary 2020 ny Meta.mk.
Meta.mk: Mahay mamantatra ny vaovao diso ve ny besinimaro ary hatraiza ny fahitana izany eo amin'ny fampitam-baovao Kroaty?
Damira Gregoret (DG): Tao anatin'ny dimy na enina taona teo izay dia sarotra ho antsika ny namantatra ny fanodikodinam-baovao sy ny vaovao diso . Na dia tsy azoko antoka aza ny tokony hiantsoako an'io vaovao io, izany hoe ny vaovao rehetra izay ampitain'ny mpanao gazety noho ny tsy fahafantarany na noho ny tsy fahalalany dia midika izany fa vaovao sandoka na fanodikodinam-baovao tsotra fotsiny. Amin'ny lafiny iray, mazava fa manan-java-kendrena ny famoahana vaovao diso.
Meta.mk: Iza no loharano voalohany amin'ny vaovao diso?
DG: Hitako fa tsy dia manana olana lehibe amin'ny vaovao diso izahay aty Kroasia, farafahakeliny, tsy amin'ny fampitam-baovao mahazatra, fa saingy misy ny fanolanana ny zava-misy sasantsasany eo amin'ny fetran'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao, izay azo raisina ho toy ny vaovao diso. Tsy lasa olana lehibe anefa izany satria mbola soa fa mibahan-toerana ny fampitam-baovao mahazatra aty Kroasia, saingy azo antoka fa tokony haraha-maso izany ary tokony hisy ny hetsika atao manoloana izany. Ny fanontaniana dia hoe amin'ny fomba ahoana? Manahy ny momba ny angondrakitra aho mijery an'i Serbia ary mahavariana ny fomba nahatongavan'ity firenena ity amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao. Mety ho avy amin'ny fihaonan-tsinerjia ny olana, izany hoe ny finamanana izay tsy voatery ananana ao anatin'ny firafitry ny fanjakana iray. Tokony hitandrina bebe kokoa ny mpanao gazety ary amin'ny farany, hampahafantatra ireo andrim-panjakana maro ao anatin'izany ny Vaomiera Eoropeana.
Meta.mk: Inona no matetika lohahevitra resahana ao amin'ny vaovao diso any Kroasia?
DG: Ireo mpifindra monina, kanefa hoy ihany aho hoe mitranga amin'ny sisin'ny tontolon'ny fampitam-baovao izany, izay hifa fa nihoatra ny tokony ho izy ny isan'ny mpifindramonina ary etsy ankilany misy ny fampitandremana fa mahery setra ny mpifindra monina ary mety hitranga izany amin'ny toe-javatra sasany. Saingy tokony hampiseho fanavakavahana miabo ny mpanao gazety, izany hoe tsy tokony hamoaka ny vaovao rehetra mety hiteraka fankahalana mifototra amin'izany.
Tadidiko ny lahatsoratra iray izay nilaza fa nanafika sy nandroba trano maro ny mpifindra monina ary ny ampitson'iny vao tonga ny vaovao avy any amin'ny polisy fa trano iray ihany no nitrangan'izany ary tsy avy amin'ny mpifindra monina. Noho izany fomba izany, efa eto ny fahatahorana ny mpifindra monina izay miparitaka manerana an'i Eoropa ary ampiasaina amin'ny famoronana vaovao diso.
Meta.mk: Misy ve ny fihetseham-po avy amin'ny olom-pirenena, ny fiarahamonina, ny vahoaka, ny andrim-panjakana ?
DG: Sarotra amiko ny manazava ny fihetsiky ny tsirairay avy amin'ny alàlan'ny isa sy ny zava-misy. Heveriko fa mirona amin'ny finoana ity karazana vaovao sandoka ity ny olona, satria tsotra – mahatsiaro ho voaro ny olona ao anatin'ny sisintanin'ny firenen'izy ireo izay tsy misy vahiny manakorontana ny filaminany. Saingy heveriko fa tokony hisy ny andraikitra avy amin'ny fampitam-baovao ary ny fampitam-baovao no tokony hijoro sy hanafoana ireo tahotra ireo. Eny, tsy amin'ny alàlan'ny fampahafantarana izany anefa fa amin'ny alàlan'ny fanazavana amin'ny olona ihany fa ilaina ny mitondra tena tahaka ny olombelona ao anatin'ny toe-javatra rehetra. Tokony hanao fihetsika araka ny maha-olombelona izy ireo.
Meta.mk: Azafady mba hazavao hoe ahoana no fomba handrindrana ny olana ao Kroasia – misy ve ny fitsipika manokana mikasika ny resaka fankahalana, vaovao diso?
DG: Efa nisy ny resaka nifanaovana momba izany na dia sarotra amiko aza ny mieritreritra ny fomba handrindrana azy. Azoko antoka fa misy fomba azo atao. Misy ny lalànan'ny mpanao gazety izay tsy misy fehezan-dalàna famaizana ao anatiny. Mavitrika amin'io sehatra io ny Fikambanan'ny Fampitam-baovao Kroaty kanefa toy ny mpanohana ihany. Afaka manao tsara kokoa isika amin'ny ady amin'ny vaovao diso sy ny kabarim-pankahalana, saingy tsy mampatahotra ny zava-misy.
Rosia 9 ora izay
Rosia 18 ora izay